ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: Happy Birthday ... Mr Pooh
Happy Birthday ... Mr Pooh
ဒီနေ့က ညီငယ်တစ်ယောက်လိုခင်ရတဲ့ ဘလော့ဂါလေး အိုအေစစ်မောင်ပွတ်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ ... သူ့အတွက်တော့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်ခွင်တစ်နေရာထဲက တစိမ်းတရံတွေကြားမှာ ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီး ဖြတ်သန်းရမယ့် ပျင်းစရာမွေးနေ့လေးတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ...။ မောင်ပွတ်ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်ပေးဖို့ စဉ်းစားရင်း ကျွန်တော် ... ` တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းရသော အထိမ်းအမှတ်နေ့များ ´ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ အတွေးနယ်ချဲ့မိခဲ့ပါတယ် ...။
မောင်ပွတ်လဲ ... မိသားစုနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခြူကလေးနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်၊ မွေးနေ့လေးကို ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်နေရမယ့် အခုလိုအချိန်မှာ ... သူ့ရဲ့ဆ န္ဒတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာပဲ ... စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်နေရာက တစိမ်းတရံတွေကြားမှာ ... အလုပ်တွေဇယ်ဆက်သလိုလုပ်နေရမှာသေချာပါတယ် ...။
ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ ...။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ကျွန်တော်တို့ တွေ လက်ခံလိုက်ရဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ သိထားပါတယ် ...။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ... ဆန္ဒတွေနဲ့ ထပ်တူမကျတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဒီလိုပဲ လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရတာပါပဲ ...။ အချို့သောရက်တွေမှာ သိပ်မသိသာပေမယ့် ... မိမိတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ အမှတ်ရစရာလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ... အလေးအနက်ထား မှတ်သားထားခဲ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်ထဲက လွမ်းဆွတ်တမ်းတစိတ်ဟာ ... တစ်ဆစ်ဆစ် နာကျင်လာတဲ့ အထိအောင်ကို ဖြစ်လာတတ်တာ ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ...။
မောင်ပွတ်လဲ ... အဲဒီ့လိုပဲခံစားနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မှန်းလို့ရပါတယ် ...။
အဲဒီ့လိုအခါမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိမနေဘူး ဆိုတဲ့အတွေးတွေကို ဘေးချထားပြီး ... ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တူတဲ့သူတွေ ဟာ တစ်နယ်စီခြားနေပေမယ့် စိတ်ချင်းနီးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ထိမ်းကြောင်း ရှေ့ဆက်ကြရပါတယ် ...။
အဲဒီ့တော့ ဒီနေရာကနေ ညီငယ်မောင်ပွတ်ကိုပြောချင်တာက ... ရှေ့ဆက်ပါ ... ကြိုးစားပါ ... မင်းရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မင်းချစ်တဲ့သူတွေ၊ မင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေ မင်းအနားမှာ ရှိမနေပေမယ့် ... ထပ်တူနီးပါးတူညီတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ မင်းကိုသတိတရရှိနေကြတယ်ဆိုတာကို သိထားပြီး ... အားအင်တွေမွေးပါလို့ ...။
ပြောချင်တဲ့ စကားလေးနဲ့အတူ ... နောက်နောင်မွေးနေ့လေးတွေကို မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းလွန်မြောက်နိုင်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ် ...။
Happy Birthday ... ပါ ... မောင်ပွတ်ရေ ...။
မွေးနေ့လက်ဆောင်ကြီး ... မစ်ကီမောက်စ်လေးကို မင်းဆီအရောက်ပို့ ခိုင်းလိုက်တယ် ...။ အထဲမှာ ဘာပါလဲဆိုတော့ ... မင်းဖာသာပဲဖွင့်ကြည့်ပေါ့ကွာ ...။ စိတ်ကူးတွေကိုအတောင်ပန်ဖြန့်လိုက်ရင် ... ကိုယ်လိုချင်တာမှန်သမျှ ... ရင်ထဲကိုရောက်လာမှာပဲလေ ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, January 22, 2008
ံHappy Birthday "မောင်ပွတ်"..
May all wishes and dreams can come true..
အစစအရာရာအတွက်၊ အမြဲကူညီနေတဲ့အတွက်၊ တိုင်ပင်ဖေါ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်မွေးနေ့က ကျွန်တော်ထင်ထားတာထက် ပိုစည်ကားနေပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး ခွင့်ယူထားတယ်ဗျာ။ အစ်ကို့ကို သတိရနေတယ်။ အစ်ကိုလည်း အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ပွတ်ကလေးရေ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးဟေ မစ်ကီသယ်လာတဲ့ အထုတ်ထဲက ခြူသစ်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် ပါဆယ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်လေ ခုတ်ထစ်ပြီးတော့တော့ မထည့်ပေးပါဘူး သနားပါတယ် ခေါက်ခက်ပီးတော့ ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် ပီးတော့ ညမှာစားမဲ့ ကြွက်ကြော်အဲလေ ယောင်လို့ ကြက်ကြော် နာ့ဖို့လို့ ပိုစားပေးနော် အဟိဟိ
Juan Antonio HERGUERA TORRES said...
Greetings from Spain. I've read that you have been arrested by the dictator Than Shwe, just because you compile poetry...
Just to let you know, we're looking forward for your freedom.
Free Burma [spanish blog]
Free Nay Phone Latt.
Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace Peace
Freedom....for my friend.!
Best Wishes for you (Nay Lone Phat)...
January 31, 2008 at 4:55 AM
Burmese speakers, you can help here : http://my.wikipedia.org/
February 1, 2008 at 3:35 AM
ပြီးတော့ သင့်အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်း ယုံပါ၊
သင့်ပတ်လည်မှာ သင့်ကို ယုံကြည်ပြီး
သင့်ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်အောင် ကူညီမယ့် သူများနဲ့ ၀န်းရံထားလိုက်ပါ၊
ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာ စိန်ခေါ်ချက်တွေ ရှိတဲ့ကြားက
အိပ်မက်တွေကို ရှင်သန်နေပါစေ …။
ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သာ တိုးတက်မှုကို ကြုံတွေ့ရနိူင်တယ်၊
မဖြစ်နိူင်ဘူးဆိုတာတွေကို လုပ်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင် စိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့သာ၊
ကြီးမြတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မှာပါ …။
အောင်မြင်ရေးအတွက် သော့တချောင်းသာ ရှိတယ်၊
လောကမှာ သင်မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာ ဘာမှမရှိနိုင်ပါ …။
There Is Only One Key To Success: Never Quit!
(by LISA MARIE YOST)
and your vision of the future.
those who believe in you and will
Keep your dream alive despite
the challenges along the way.
Change can be frightening,
Nurture it, and there
will be nothing you can't do.
Happy Birthday Mr Pooh...
I wish Santa Mickey brings you those clippers to set you free Now.
haveathoughtful day... lots of love going your way.... J.
We are with you, no matter what, we all believe that one day we be on the right track again. No matter, how much we have suffered , but one thing for sure, what we being suffered right now will not pass to our next generation.
Wish you could free soon.
Military Regime, we are not blind!!!!!!!!
I applaud your courage and sacrifice. I hope your dream comes true.
Ko nay myo,
Hope you will be free as soon as possible. We are with you! Be courage!
Hi, Nay Phone Latt. Here, CHucky again, from Spain.
I've just read (and post) that you've been condemned to more than 20 years imprisonment.
I just write to tell you, your family and the rest of Burma, that we don't forget you.
Free Nay Phone Latt!
အစ်ကိုရေ - ဒီနေ့ကျွန်တော့်မွေးနေ့ ရောက်ပြန်ပြီ။ တချို့တွေက အချိန်ကုန်မြန်လိုက်တာတဲ့။ အသက်တစ်နှစ် ခဏလေးပဲတဲ့။ အချိန်ကုန်မြန်၊ မမြန်ဆိုတာ ဆိုဖာပေါ် ထိုင်နေတဲ့လူနဲ့ မီးခဲခုထိုင်နေတဲ့လူ သတ်မှတ်ပုံခြင်းမတူဘူးဆိုတာလေး သတိရမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မီးခဲပေါ်ထိုင်နေတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုဖာပေါ်မှာ ဇိမ်ကျနေတာတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူးလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံး ကျွန်တော်တို့နားမှာ အစ်ကိုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ထဲကလိုပဲ စိတ်ကူးတွေ အတောင်ပံဖြန့်ထားတဲ့ အစ်ကိုဟာ ဘယ်လိုအကျဉ်းအကျပ်တွေထဲကမဆို လွတ်လပ်နေဆဲပဲလို့ ကျွန်တော်ယုံတယ်။ ဖြတ်သန်းရမယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက် စိတ်ဓာတ်နဲ့ခွန်အားတွေ ကြံ့ခိုင်နေပါစေလို့လည်း ကျွန်တော် အလေးအနက်ဆုတောင်းပါတယ်။ အစ်ကို အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။
အကိုရေ ကျွန်တော်ကအခုမှ အကို့ ဘလော့ကိုရောက်ဖူးတာပါ ။
အကို ခေါင်းစီးလေးမှာတင်ထားတာလေးကို တွေ့မိလို့ပါ ။
( ကျိုးပျက် )တယ်ဆိုတဲ့ အသုံး နဲ့ ကြိုး ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံး အဲဒီ(၂ ) ခုကို ရောပြီး သုံးထားတာကိုတွေ့ရလို့ နားမလည်နိင်ပါဘူး ။ တမင်ပဲ သုံးထားတာလား ဒါမှမဟုတ် မတော်တဆပဲ မှားယွင်းပြီးသုံးတာလားလို့ ...
ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးနော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က မှားနေကျမို့
အကို့ ဂစ်တာက ကြိုး ပြတ်တာလား ကျိုးပျက် ပျက်စီးနေတာလား သိပါရစေအကို ...
လေးစားလျှက် ညီငယ် nainai
နောက်ထပ် ကျွန်တော့်မွေးနေ့ တစ်နှစ်ပေါ့။ အစ်ကို့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်ကို နောက်ထပ်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူချင်းလည်းမတွေ့ဖြစ်ပေမယ့် စာအဆက်အသွယ်လေး ရှိနေလို့ တော်သေးတယ်လို့ ဖြေမိပါတယ်။ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း အစ်ကို့ကို အရင်လို ခင်မင်လေးစားဆဲပါ။ အစ်ကို့စာတွေကလည်း သံလွင်အိပ်မက်ကနေတဆင့် အစ်ကိုမျှော်လင့်တဲ့ လူငယ်တွေဆီ စီးဆင်းနေဆဲပါပဲ။ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေနေ စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်တဲ့ အစ်ကို အခက်အခဲအားလုံးကို ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ဖြတ်ကျော်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အစ်ကို ကျန်းမာပါစေ။
အစ်ကိုရေ - ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ နောက်တစ်နှစ်ပေါ့။ ဒီနေ့ရောက်တိုင်း အစ်ကိုရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကိုလာဖတ်ပြီး guilty ဖြစ်သလို ခံစားနေရတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ခုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဗျာ။ တွေ့ရအောင်ပြန်လာခဲ့ဦးမယ်။
ကျွန်တော်နှင့် အိပ်မက်များ (၄)
ကျွန်တော် မသိခဲ့သော နေ့ ...
စင်ကာပူရောက် ဗမာ Blogger များ ဆုံစည်းကြရန် ဖိတ်ကြာ...
ကျွန်တော်နှင့် အိပ်မက်များ (၃)